HomeWararka CaalamkaShirkada ugu Horeysay ee Sweden oo Shaqada ka Ceyrineysa Shaqaalaha aan is Talaalin
December 31, 2021 Wararka Caalamka, Wararka Maanta 0
Shirkadda caawimada gaarka ah ee Lystra ayaa ku dhawaaqday inay doonayso inay shaqada ka caydhiso inta u dhaxaysa 15 iyo 20 shaqaale ah oo diiday in laga tallaalo Corona.
Go’aanka waxaa ku jira dhammaan shaqaalaha, haddii ay ka shaqeeyaan daryeelka ama shaqaalaha maamulka.
Sarkaal ka tirsan shirkadda ayaa maanta u sheegay Raadiyo Sweden in “dhammaan shaqaalaha ay tahay in laga tallaalo Corona si loo ilaaliyo macaamiisheena iyo dadka ka tirsan kooxaha halista ah,” isagoo raaciyay “Shirkaddu waxay siisay shaqaale kasta oo aan la tallaalin muddo 3 bilood ah si uu u qaato tallaalka, haddii kale in shaqada laga eryo.”
Adeegga kaalmaynta shakhsi ahaaneed waxa la siiyaa waayeelka iyo dadka baahiyaha gaarka ah qaba ee aan nolol maalmeedkooda ku taageeri karin.
Ururka “kommunal” ayaa dhaliilay go’aanka shirkadda oo ka howlgasha qeybo badan oo dalka ah.